Otu esi etinye Discord na Fedora 34/35 - LinuxCapable
Fraịde, Jenụwarị 14, 2022 Sunday, October 10, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye Discord dị ka ngwugwu Snap
Nhọrọ 2. Wụnye Discord RPM Fusion Repository
Nhọrọ 3. Wụnye Discord na Flatpack
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye onye ahịa Discord na Fedora site na iji ụzọ atọ dị iche iche.
OS akwadoro: Fedora Linux 34 ma ọ bụ 35 (ụdị ochie ka akwadoro kwesịrị ịrụ ọrụ)
Tupu ịga n'ihu na ntinye nke Discord, mee iwu ndị a iji wụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Fedora gị.
Enwere ike itinye discord site na njirimara ngwugwu snap arụnyere na Fedora. Discord na-ekesa ma na-echekwa ngwugwu Discord snap.
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye onye ahịa Discord:
Ọ bụrụ na ịchọghịzi Discord arụnyere, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye ebe nchekwa enweghị n'efu site na Mgbanwe nke RPM iji wụnye discord. Ọtụtụ ndị ọrụ Fedora ga-ahọrọ iji ebe nchekwa a karịa ịwụnye aka ma ọ bụ iji Snaps dị ka ebe nchekwa na-enweghị n'efu na nke na-abụghị nke nwere ụfọdụ nnukwu ngwa nwere ike itinye.
Nke mbụ, wụnye RPM na-abụghị free dị ka ndị a:
Ozugbo etinyere ya, megharịa ngwa ngwa na listi nchekwa gị:
Na-esote, wụnye Discord site na iji iwu a:
Mara na a ga-akpali gị ibubata igodo GPG n'oge nrụnye.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ibubata igodo GPG wee mezue nrụnye.
Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịmalite Discord na nke mbụ otu a na Fedora 35, malitegharịa sistemụ gị.
Ozugbo ịbanyeghachiri, Discord kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Nhọrọ nke atọ bụ ịwụnye Discord na Flatpack nke etinyere na sistemụ Fedora gị. Usoro a na-ewu ewu yana ndị ọrụ Fedora.
Na-esote, wụnye Discord site na iji Flatpack dị ka ndị a:
ụdị "Y" ugboro abụọ (x2), wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na nwụnye.
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị discord nke Flatpack, mee iwu a:
ụdị "Y" ugboro abụọ (x2), wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mwepụ nke Discord site na iji Flatpack.
Ugbu a mepee Discord, ị ga-abịa na ibe nbanye, ma mepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri akaụntụ dị adị, nke ahụ bụ ya; ị tinyela Discord nke ọma na desktọpụ Fedora gị.
Nkuzi a akọwapụtala otu esi etinye Discord site na snap, Flatpack, ma ọ bụ ebe nchekwa rpm fusion. Agbanyeghị, ngwugwu Snap enweghị mmasị na ya, yabụ ebe nchekwa rpm ga-abụ ụzọ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Discord bụ ọnụ ọgụgụ 1 ikpo okwu egwuregwu maka obodo ịntanetị maka afọ ndị na-abịa. Agbanyeghị, TeamSpeak kwadoro onwe ya na-alọghachi. Ọdịnihu ga-ekpebi ma Discord nwere ike idobe ọchịchị ya, n'ihi nchegbu nzuzo nke ụbọchị ndị a.
Ị na-achọ ọrụ ọhụrụ? Lelee ụfọdụ ohere ọrụ ọhụrụ na Jooble.
Otu esi etinye Discord na Ubuntu 22.04 LTS
Otu esi etinye Discord na AlmaLinux 8
Categories Fedora Tags Nsogbu, Fedora 34 Mail igodo
Wenezde, Ọktoba 20, 2021 10:07 nke ụtụtụ
Dnf adịghị ka apt, “mmelite” na “mmelite” pụtara otu ihe. Na Fedora ozi nchekwa ahụ na-enweta ume dị ka ntọala dị na faịlụ /etc/dnf/dnf.conf. Akwụsịla utu aha “mmelite” a ga-ewepụ ya na ụdị n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmanye ume ọhụrụ repo data ozugbo jiri nhọrọ -refresh, dị ka na "sudo dnf upgrade -y -refresh" nke bụ iwu Fedora ziri ezi maka ihe ị na-agbalị ime.
Wenezde, Ọktoba 20, 2021 10:12 nke ụtụtụ
Daalụ maka ozi ahụ nwere ekele maka ya.
Aga m emelite nkuzi Fedora, daalụ.
Tuzdee, Jenụwarị 25, 2022 1:08 nke ụtụtụ
Cannot install the RPMs for both Skype and Discord at the same time (Fedora 34) as there is a clash between the two with /usr/lib/.build-id/34/feaa549462e8818baa0629ce11da344465882b. But why are these two packages even USING the same build-ID in the first place?
Tuzdee, Jenụwarị 25, 2022 8:55 nke ụtụtụ
They both use the same chrome-sandbox build-id, silly I know but yeah it’s been reported as per the link below, basically, someone got lazy somewhere copying the same build info.
I haven’t tested it yet, but you could try doing installing it with
I will try and get a 34 version going in the next day or so, but the worse case you may need to run one application RPM, another with Flatpak or something. What a silly issue I must admit.
Tuzdee, Jenụwarị 25, 2022 9:30 mgbede
Yep, after my message above I found the “excludepath” parameter. I figured I needed both applications on my daughter’s desktop system (while on an unscheduled week home from school).